Adiny telo mahery vao maty ny afo: trano fanobiana entam-barotra kila forehitra, tetsy Ambalavao | NewsMada
Par Taratra sur 24/09/2020
Nirongatra ny haintrano tato ho ato izay. Omaly, trano fanobiana entam-barotra iray indray ana Karana kila hotohoton’ny afo, tetsy Ambalavao Isotry. Naharitra ora telo teo ho eo vao matin’ny mpamonjy voina ny afo.
Olona nifanjevo, mpivarotra mikoropaka, lalana tapaka, sekotra mijolofo tsy nifankahitana… Santionany amin’ny zava-nitranga nandritra ny fahamaizana goavana tao amina trano lehibe roa eny Ambalavao Isotry, omaly tolakandro. Trano lehibe roa fitahirizana entana no kila hotohoton’ny afo. Tsy vitan’izay fa mbola niampita tamina trano lehibe iray an-dalam-panamboarana ihany koa ny afo, araka ny fanazavan’ny mpamonjy voina. Nanomboka tamin’ny 3 ora tolakandro ny firehetan’ny afo tao amin’ilay trano fitahirizan’entana ary tena nanano sarotra ny mpamonjy voina ny famonoana ny afo satria lamba ny ankamaroan’ireo entana mipetraka tao amin’ity trano ity. Teratany karana ny tompon’ity magazay fitobian’entana ity ary Karana ihany koa ny tompon’ilay tranobe mifanolo-bodirindrina aminy izay notselaran’ny afo tamin’io fotoana io. Ireo hazo nampiasain’ireo mpanamboatra trano no notselaran’ny afo, araka ny fanazavana voaray teny an-toerana. Fipoahana herinaratra niainga avy ao amin’ilay trano fitahirizan’entana no voalaza fa nahatonga ny fahamaizana. Fotoana fohy taorian’ny firehetana, tonga nanao ny asam-pamonjena teny an-toerana ny avy amin’ny mpamonjy voina. Nanano sarotra ny famonoana ny afo noho ny fisian’ireo entana mora mirehitra tao an-trano. Nijoalajoala tsy nisy toy izany koa ny afo.
Jiolahy iray tratra nanendaka nandritra ny firehetana…
Tapaka nandritra ny ora maromaro mihitsy ny lalana miditra mankany Ambalavao Isotry nandritra ny famonoana ny afo. Isan’ny nanahirana ho an’ny mpamonjy voina koa ny fisian’ireo mpivarotra kojakojana moto sy momba ny jiro mifanakaiky amin’ilay trano nirehitra. Nikoropaka namoaka ny entany tao am-pivarotana avokoa ny ankamaroan’ireo mpivarotra satria natahotra ny fiitaran’ny afo.
Misy ihany koa ny manararaotra ny fahavoazan’ny hafa ka manao ny ataony rehefa misy voina toy izao. Tsy kely lalana ny ratsy satria jiolahy iray no tratra nanendaka nandritra ity fahamaizana teny Ambalavao Isotry ity. Nosamborin’ny polisy avy hatrany izy ka nentina nanaovana fanadihadiana any amin’ny kaomisaria. Na teo aza anefa ny firehetana, voafehy ihany ny afo ka tsy niitatra amin’ireo trano fivarotana manodidina. Tsy nisy ny aina nafoy na naratra. Mitontaly 27 ny fahamaizana ka trano ny 17 amin’ireo raha tanety sy fiara kosa ny ambiny, matetika ireo afo tsy maty ao an-trano no mitarika ny fahamaizana ary tamin’ity volana septambra ity no betsaka fahamaizana indrindra, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny sampana mpamonjy voina, ny Lietnà-Kly Razafimanahaka Tiana
J.C sy Fanou